कोमल वलीले दिइन् एकाबिहानै महत्वपूर्ण र रोमाञ्चक सुझाव ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार कोमल वलीले दिइन् एकाबिहानै महत्वपूर्ण र रोमाञ्चक सुझाव !
कोमल वलीले दिइन् एकाबिहानै महत्वपूर्ण र रोमाञ्चक सुझाव !
on: ६ पुष २०७४, बिहीबार ०८:२९ In: पु.समाचारTags: कोमल वलीले दिइन् एकाबिहानै महत्वपूर्ण र रोमाञ्चक सुझाव !No Comments
काठमाण्डौ । नेपालकी प्रसिद्ध लोकगायिका हुन् कोमल वली । उनलाई पछिल्लो समयमा एमालेकी नेतृ भनेर समेत चिनिन्छ । बेला बेलामा अत्यन्तै लोकप्रिय लोकगीतहरु पस्किएर दर्शकलाई मख्खै पार्दै आएकी वली बेला बेलामा चर्चाको शिखरमा रहन्छिन् ।
उनी सामाजिक सञ्जालमा समेत उत्तिक्कै अपडेट रहने गायिका र नेतृमा पर्छिन् । त्यसैले उनलाई यो पटक हामीले सामाजिक सञ्जालमा फलोअप गरेका थियो । बिहीबार एकाबिहानै उनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अकाउन्छमा एउटा रोमाञ्चक स्टाटस् भेटियो । उनले धेरैलाई एउटा सत्य सम्झाइदिएकी छन् ।
बिहीबार अर्थात डिसेम्बर २१ वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन, वर्षकै निकै लामो रात । यो दिनलाई कसरी स्वर्णिम बनाउन सकिन्छ भनेर गायिका वलीले राम्रो टिप्पणी गरेकी छन् । सबै मित्रहरुलाई उनले मिठो कफी अर्थात रमाईलो गरेरै भएपनि यो दिनलाई रोमाञ्चक बनाउन सल्लाह दिएकी छन् ।
त्यसैले एकाबिहानै गायिका वलीले दिएको यो सुझाव छोटो दिनका लागि सबैलाई मननयोग्य हुनसक्छ । पौष र माघमा आउने यस्ता छोटा दिनहरुलाई अझ सिर्जनात्मक ढंगले सदुपयोग गर्न सके समाज विकासकै लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्थ्यो कि !
Tags: कोमल वलीले दिइन् एकाबिहानै महत्वपूर्ण र रोमाञ्चक सुझाव !
यी हुन् एमाले र माओवादीबीच एकता हुनुहुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरु
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार २१:२७
६ पुष २०७४, बिहीबार ०८:२९